Iincwadana ezimnandi zemfazwe
Uphengululo lweenoveli zemfazwe
Ngaphantsi kweSkylet Sky, nguMark Sullivan
Kusothandweni nasemfazweni yonke into ivumelekile. Kwaye masingatsho ukuba zombini izakhiwo ziyahlangana ... Kuphela yindlela enjalo kwaye ithathwe kwibali eliyinyani inokukhokelela uMark T. Sullivan kude nohlobo oluqhelekileyo lwemfihlakalo kunye nokuthandabuza apho wayehamba naye ...
Ukhozi kwisaqhwithi, nguBen Kane
Uthotho lwee-Eagles zaseRoma lufikelela kwisiphelo kunye neli nxalenye lesithathu. Umbhali waseKenya uBen Kane uvale umxholo wakhe wamva wentsomi ezinikele kwezona zinto zinjengemfazwe. Amaxesha akude apho imimandla yayikhuselwa okanye imikhondo yegazi yoyiswa ...
Ukophula okusekwe akukho lula. Ukwenza ngokubhekisele kwizicwangciso zosapho ngakumbi nangakumbi. UPedro uwuthiyile umsebenzi wezomkhosi, owawuphantsi kookhokho bakhe. Kwiminyaka engamashumi amabini, inkwenkwe ijolise ngakumbi kwicandelo lokucinga, kwaye ivula inzululwazi ...
Indlu yeAlfabhethi, nguJussi Adler Olsen
Ngomnwe ofana nowomlobi, umbhali wale noveli usibalisela ngebali elikwisinye, kufutshane nohlobo lomlobi lombhali, waphinda wakhutshwa ngamagama ahlukeneyo okoko yapapashwa okokuqala ngo-1997. kwi ...
Ubuso bakhe ngexesha, ngu-Alejandro Parisi
Ngesinye isihlandlo sele ndithethile ngothando olungathethekiyo, ngakumbi ukuphononongwa kwencwadi ethi The Book of Parables, ebhalwe ngu-Olov Enquist. Kule meko sikwafumana iidosi ezinkulu zothando olungavumelekanga oluthathwe kugqithiso lokuziphatha kunye nendalo, njengoko sinikwa ngokubanzi ukuqonda. ...
Iiflegi kwinkungu, nguJavier Reverte
Imfazwe yethu. Kusalindwe izenzo zokwehlisa umthetho, ezopolitiko kunye noncwadi. Imfazwe yamakhaya yathutha izihlandlo ezininzi kuncwadi lweSpanish. Kwaye ayikaze ibenzakalise imbono entsha, indlela eyahlukileyo. Iiflegi kwinkungu yile, ibali malunga neMfazwe yamakhaya ...